အဘယ်အရာကိုကြီးစွာသောလေ့လာဆန်းစစ်စေသည်? | Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, မေလ 5, 2009 တနင်္ဂနွေ, Aprilပြီ 3, 2016 Douglas Karr
မှာ eMetrics စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအမြင့်ဆုံးထိပ်သီးအစည်းအဝေးဒေတာကိုလေ့လာဆန်းစစ်သူလုပ်တဲ့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စကားပြောဆိုမှုရှိခဲ့တယ်။ အခန်းထဲမှာလေ့လာသုံးသပ်သူများနှင့်ပြည့်နေသည့်အခန်းတစ်ခန်းနှင့်အတူ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းသောမေးခွန်းဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့သည့်အဖွဲ့သည်စီးပွားရေးဆိုင်ရာလေ့လာသုံးသပ်သူများနှင့်ဒေတာဆန်းစစ်လေ့လာသူများရှိကြောင်းသဘောတူခဲ့ကြပြီးတစ် ဦး ချင်းစီ၏မျှော်လင့်ချက်များမှာအနည်းငယ်ကွဲပြားသည်။
စီးပွားရေးလေ့လာသုံးသပ်သူများကသတင်းအချက်အလက်များကိုစီးပွားရေးရည်ရွယ်ချက်များနှင့်အတူဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်သည့်ပုံစံဖြင့်ပေးသည်။ ဒေတာကိုလေ့လာသုံးသပ်သူများကရိုးရှင်းစွာဒေတာများကိုပေး။ နှစ် ဦး စလုံးသည်သတင်းအချက်အလက်များကိုပရိသတ်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်နှင့်ပရိသတ်ကိုအနည်းဆုံးရှုပ်ထွေးမှုနှင့်အတူကောက်ချက်ဆွဲနိုင်သည့်နည်းဖြင့်အရည်အသွေးကိုဖော်ပြသင့်သည်။
လေ့လာသုံးသပ်သူတစ် ဦး ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုသည်ကြီးမားသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်ကြောင်းသဘောတူညီမှုတစ်ခုရရှိခဲ့သည်။ မိုက်ခရိုဆော့ဖ်မှ Chris Worland လေ့လာသုံးသပ်သူများကို ၃ သတိပညာရှိသောပုံးထဲထည့်သည် မှာယူသူ, အ သြဇာလွှမ်းမိုးမှု, ပြီးနောက် ယုံကြည်စိတ်ချရသောဆုံးဖြတ်ချက်ချသူ။ သင်၏အဖွဲ့အစည်း၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံသည်သင်၏လေ့လာသုံးသပ်သူများ၏သြဇာသက်ရောက်မှုကိုဆုံးဖြတ်ပေးလိမ့်မည်။
Andrew Janis ကအချက်အလက်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူများ၏စိတ် ၀ င်စားမှုကိုနှိုင်းယှဉ်။ ပြသသည်။ အောင်မြင်သောဒေတာဆန်းစစ်လေ့လာသူများ၏အကျင့်စရိုက်လက္ခဏာများသည်အခြေအနေနှင့်အချက်အလက်များကိုပတ် ၀ န်းကျင်တွင်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ပရိသတ်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်း၊ စီးပွားရေးနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းကိုနားလည်ခြင်းနှင့်အမြင်အာရုံကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုအားလုံးကသဘောတူကြသည်
မည်သည့်ကြီးမားသောကုမ္ပဏီမဆိုသူတို့၏လေ့လာသုံးသပ်သူများ၏စွမ်းရည်များနှင့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအပေါ် အခြေခံ၍ အောင်မြင်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ပျက်ကွက်နိုင်သည်။ ကြီးမားသောကုမ္ပဏီများအတွက်သင်၏ ၀ န်ထမ်းများသည်မတူညီသော ဦး ထုပ်များကို ၀ တ်ဆင်လေ့ရှိကြသည် - လူတိုင်းတွင်ဒေတာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးရလဒ်များကိုပံ့ပိုးပေးသည်။ ကြီးစွာသောလေ့လာသုံးသပ်သူများ (သို့မဟုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့် ၀ န်ထမ်းများ) ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်သင်၏ကုမ္ပဏီ၏အောင်မြင်မှုသို့မဟုတ်ကျရှုံးမှုအတွက်အရေးကြီးသည်။ ပညာရှိစွာရွေးချယ်ပါ။
Outliers - အောင်မြင်မှုအတွက်ပုံပြင်
ချစ်ခင်ရပါသောတွစ်တာ၊ ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ပါရူးသွပ်မှုကိုရပ်တန့်ပါ
မေလ 7, 2009 မှာ 5: 01 pm တွင်
Business Analysts should also be good at trend analysis and identification. A3–6month head-start can make or breakaproduct especially in the short life-cycle technology sector.
မေလ 8, 2009 မှာ 9: 19 pm တွင်
Great post! We creative people thrive on the information that great analysts bring to the table to craft breakthrough direct marketing materials. We need more great analysts to step front and center.